မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက်: April 2011
Posted by မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက် at Tuesday, April 26, 20110comments
မြန်မာစစ်အုပ်စုက ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်ရာမှာ မြန်မာအမျိူးသမီးတွေ ပြည်ပထွက် အလုပ်လုပ်တာကို ကန့်သတ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဂျာနယ်ထဲမှာ ပါတာ ပြောတာပါ။ ပြည်ပက အင်တာနက် သတင်းဌာနတွေကတော့ ပြောတာပဲ ရှိတယ်၊ ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့သူကတော့ ရှိနေတာပဲ။ ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ပွဲစားကုမ္မဏီတွေကလည်း အလုပ်ဖြစ်နေတုန်းပဲ လို့ ရေးနေကြတယ်။ ဒါက အလုပ်သမားညွှန်ကြားဦးစီးဌာနဘက်က သတင်းတွေဖြစ်တယ်။
နောက်တချက်ကတော့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးက အနေအထားက အရင်တုန်းကတော့ အမျိူးသမီးတွေ ပတ်စ်ပို့လျောက်တာကို ကန့်သတ်ဖူးတယ်။ အခုကတော့ အကန့်အသတ်တွေ စိစစ်တာတွေ မရှိတော့ဘူး။ မိန်းကလေးတွေ ပြည်ပထွက်တာကို မျက်လုံးဒေါက်ထောက်ကြည့်ပြီး တဖက်ကလည်း လက်ကြီးတွေ ဖြန့်ထားတော့ ငွေမျက်နှာကြောင့် မျက်လုံးတွေလည်း စုံလုံးကန်းပြီး ပတ်စ်ပို့မှာ ၃ နှစ် သက်တမ်းတုံး နဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကြီး ငယ်မဟူ လွတ်လပ်စွာ ပြည်ပထွက်ခွင့်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ရယူခွင့် ရှိနေပါပြီ။ စည်းကမ်းတွေ ဥပဒေတွေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ တားတယ် ဆိုဆို အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေက ဥပဒေအပေါ်မှာ ရှိနေတာကို ထည့်စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစုိုးရနဲ့ အေဂျင်စီကတော့ စည်းကမ်း စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ပြီး အိမ်တွင်းမှုအလုပ်သမလုပ်ငန်းကို စီမံထိန်းသိမ်း ခန့်ခွဲပါတယ်။ အိမ်တွင်းမှုအလုပ်သမားတွေအတွက် ခံစားခွင့်၊ လစာ၊ အခွန်၊ အိမ်ထောင်စုများက ပေးရတဲ့ အလုပ်သမားခွန်၊ ဒဏ်ကြေး၊ လိုင်စင်ကြေး၊ ပွဲစားခ စသည်ဖြင့်တွေကို စနစ်တကျ ပြဌာန်းတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ အလုပ်သမတွေကို အရည်အချင်းရှိဖို့၊ အိမ်ထောင်စုကိစ္စတွေ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စတွေ ခေတ်နဲ့အညီ အမီ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ သင်ပေးတာ၊ စစ်ဆေးတာ၊ ဘာသာစကား အပြောအဆို အနေအထုိုင် ဗဟုသု ရှိအောင် သင်ကြား စစ်ဆေး ကြည့်ကြပ်တာတွေ လုပ်ပေးတယ် ဆိုပါတယ်။ သည်တော့ သည်အလုပ်ဟာ ခေတ်သစ်ထဲက ရှေးဟောင်းအလုပ်တခု ဆိုပေမယ့် စည်းစနစ်နဲ့ ခေတ်မီမှုတွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။
ဥပမာ - အိမ်တွင်းအလုပ်သမဟာ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်၊ အလုပ်သိမ်းချိန် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိတယ်။ အနားယူချိန်၊ အားလပ်ချိန်ရှိတယ်။ စနေ တနင်္ဂနွေမှာ နားခွင့် လည်ပတ်ခွင့် ရှိတယ်။ မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်သွယ် ထိတွေ့ခွင့်တွေ ရှိတယ်။ ဒါ့အပြင် အိမ်တွင်းအလုပ်သမတွေဟာ သူတို့အားလပ်ရက်တွေမှာ အလုပ်လုပ်ရမယ် ဆိုရင်တော့ အိမ်ရှင်က သီးသန်း အပုိုငွေကြေးပေးပြီး အချိန်ပိုလုပ်ခနဲ့ လုပ်ကြရတယ် ဆုိုတယ်။ အားလပ်ရက်တွေမှာ စင်္ကာပူက စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ အသက်မွေးသင်တန်းတွေ တက်ပြီး ဘ၀တက်လမ်း ရှာခွင့် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သို့သော် စကားချပ် ၀င်ပြောရရင်တော့ - အိမ်တွင်းအလုပ်သမ အထက်ပါအတ်ိုင်း ခံစားခွင့်ရှိဖို့ကတော့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဗဟုသုတ ကိုယ်ခံ အရည်အချင်း၊ ပွဲစားများရဲ့ သဘောထားကြီးမှု၊ အိမ်ရှင်များရဲ့ အမြင်ကျယ်မှု ခွင့်ပြုမှုတွေအပေါ် အများကြီး မူတည်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင် ခံစားခွင့်နဲ့ အခွင့်အရေးတွေ စည်းကမ်း ဥပဒေတွေ သတ်မှတ်ထားပါစေ မလိုက်နာသူတွေ၊ စည်းဖောက်သူတွေကတော့ အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင်၊ အကျိူးဆောင်တွေ တဖက်ဖက်မှာတော့ ရှိနေမှာပါပဲ။
အလုပ်ပွဲစားတွေက အိမ်တွင်းအလုပ်သမကို အိမ်ရှင်ထံ အပ်ချိန်မှာ ၆ လ အစမ်းလုပ်ခွင့် ရှိတယ်။ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် မကျေလည်ရင် ပြောင်းခွင့် ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲသည် ၆ လ ကျော်ပြီး နောက်ပိုင်း ကိစ္စကတော့ အလုပ်သမားနဲ့ အလုပ်ရှင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆိုင်တယ်။ ပွဲစားနဲ့ အစုိုးရက ဥပဒေ စည်းကမ်းနည်းလမ်းအရ ၀င်ပြီး ဖြေရှင်းခွင့် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အလုပ်ပွဲစားတွေကိုအလုပ်သမတွေ ပေးရတဲ့ ပွဲစားခက စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၂၁၀၀ လောက် ရှိတယ် ကြားပါတယ်။ အဲဒါကို ၇လ ဖြန့်ပြီး တလ ၃၀၀ နှုန်းနဲ့ ပွဲစားက ဖြတ်ယူတယ် ဆိုတယ်။ အဲသည်အတွင်းမှာ အလုပ်သမက ကျန်တဲ့ လစာကို ခံစားခွင့်ရှိတယ်။ မြန်မာတွေအတွက် ပျမ်းမျှလစာက ၃၅၀ ဆိုရင် ၅၀ကို ကာယကံရှင်က စုထားလို့ ရတယ်ပေါ့။
မြန်မာအလုပ်သမတွေကတော့ မည်သုို့နည်းဖြင့် စင်္ကာပူသို့ ရောက်လာသည်ဖြစ်စေ မြန်မာသံရုံးမှာ အခွန်ဆောင်တာ၊ သက်တမ်းတိုးတာတွေကတော့ သူတို့ လမ်းကြောင်းတွေ လမ်းတွေနဲ့ လုပ်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာသံရုံးကတော့ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ အခွန်ငွေတွေ သတ်မှတ်ကြေးတွေ ရနေရင် ကျန်တာ ဘာကိုမှ သိပ်ပြီး ဂရုမစိုက်ကြဘူးဆိုတာကတော့ အများသိပြီးသားပဲ နေမှာပါ။
အခု ဥပမာ အလုပ်သမ ၂ ဦးအကြောင်း ပြောပါ့မယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန် ဗဟုသုတပေါ့။
ပထမ အိမ်တွင်အလုပ်သမကတော့ ခင်ခင်လို့ ဆိုကြပါစုို့။ မြန်မာပြည် ပြန်သွားတာ ၁ နှစ်လောက် ရှိပြီ ထင်ပါတယ်။ (အမည်မှန် မဟုတ်ပါ)။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား မိသားစုထံမှာ အလုပ်လုပ်တာ ၄ နှစ် ကြာပါတယ်။ ပွဲစားတွေကတဆင့် လာတာပါပဲ။ အိမ်ရှင်တွေက ခွင့်ပြုလို့ အားပေးလို့ ပိတ်တဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ သက်မွေးပညာသင်တန်းတွေ တက်ပါတယ်။ သင်တန်းတွေကတော့ အစုံရှိပါတယ်။ ချက်နည်း ပြုတ်နည်း၊ ကိတ်ဖုတ်နည်း၊ အထည်ချုပ်၊ သတို့သမီးဝတ်စုံချူပ်နည်း၊ ဆံပင်ညှပ်၊ မိတ်ကပ် အလှပြင် စုံလို့ပါပဲ တဲ့။ အခု သင်တန်းတခု ကောင်းကောင်း ဖြစ်မြောက်အောင်တက်ပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကလေး ဖြစ်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒီက အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ စကာင်္ပူကိုလည်း ၀င်ထွက် ကုန်သည်လုပ်နေသေးတယ်လို့ ဆိုတယ်။
သင်တန်းတွေ ဘယ်မှာ ရှိသလဲဆိုတာကို ဒီဝက်ဆိုက်မှာ ကြည့်ပါ။
နောက်တဦးကတော့ ကြင်ကြင်လို့ပဲ ဆိုကြပါစုို့။ သူကတော့ အိမ်ရှင်ဆီက ပိုက်ဆံတွေ ခိုးပြီး ထွက်ပြေးလို့ အခု စင်္ကာပူအချူပ်ထဲမှာ ရောက်နေပါတယ်။ (နံမယ်မှန်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်းထားတာပေါ့)။ သူကလည်း ပွဲစားက တဆင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံသား မိသားစုထံမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ ၃ နှစ် ရှိပြီ။ သူက အလုပ်က နားပြီး အိမ်ပြန်ချင်တာ ပေးမပြန်လို့ ဇွတ် အိမ်က ထွက်ပြေးလာတယ် ဆိုတယ်။ သူက အိမ်ရှင်ဆီက ငွေအနည်းငယ်လည်း ခိုးယူလာတယ် ဆိုတယ်။
အခုလိုမျိူး အိမ်တွင်းမှုအလုပ်သမတွေမှာ ပြသနာတွေ ဖြစ်ရင် ဖြေရှင်းပေးဖို့ အဖွဲ့တွေ၊ စေတနာဝန်ထမ်းတွေ၊ ဘာသာရေးအသင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ရှေ့နေတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ထွက်ပြေးတာက ရိုးရိူးထွက်ပြေးတာဆို သိပ်မဆုိုးပေမယ့် အိမ်ရှင်ဆီက ခိုးယူလာတာမျိူတွေဆိုရင် အမှုက ကြီးပါတယ်။ အိမ်ဖော်တွေဖက်က ကူညီင်္ပေးမယ့်သူတွေကလည်း ဒါမျိူးဆိုရင်တော့ အာဏာပိုင်တွေလက်ထဲပဲ ထည့်တာ များပါတယ်။ (မြန်မာသံရုံးကတော့ ဘာမှ ၀င်ကူခြင်း မရှိပါဘူးဆိုတာတော့ ထပ်မပြောတော့ပါဘူးနော်)။
အိမ်ရှင်ထံက အိမ်တွင်းအလုပ်သမ ထွက်ပြေးရင် ၂ ဖက်စလုံး မသက်သာပါဘူးလို့ ဆိုတယ်။ အလုပ်သမကို မိရင် ထောင်ချမယ်၊ လေယာဉ်စရိတ်ကို ပွဲစားသို့မဟုတ် အိမ်ရှင်က စိုက်ပေးရင် ချက်ခြင်း ပြန်ပို့လိုက်မယ်။ မပေးနိုင်ရင်တော့ အကျဉ်းထဲမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ ဒဏ်အတုိုင်း နေရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ အိမ်တွင်းအလုပ်သမကို မမိတော့ရင်တော့ အိမ်ရှင်က အစုိုးရထံမှာ အာမခံငွေ တင်တာ ဆုံးတယ်။ ငွေ ၁ သောင်းလောက်တောင် ဆုံးနိုင်တယ်၊ ဒဏ်ချတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အိမ်တွင်းအလုပ်သမကို ဖမ်းမိရင်တောင်မှ အိမ်ရှင်က နောက်ထပ် အလုပ်သမငှားဖို့ မလွယ်တော့ဘူး၊ နံမယ်ပျက်စာရင်းထဲ ၀င်သွားလို့ အသနားခံစာ တင်ရ၊ ဘာညာ အလုပ်ရှုပ်တယ် ဆိုတယ်။
ကြင်ကြင်ရဲ့ အမှုကတော့ ပွဲစားကော၊ အိမ်ရှင်ကပါ ဘာမျှ ၀င်ပြီး ကူညီခြင်း မရှိလို့ အချုပ်ထဲမှာ ရက်ပြည့်အောင် နေရမယ်။ နောက်ပြီးမှ ပြည်နှင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ စင်္ကာပူထောင်တို့ အချူပ်တို့ဆိုတာလည်း သက်သာလှတယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အချုပ်ခန်းတွင်းမှာ လေအေးစက်ကို အစွမ်းကုန်မြှင့်ဖွင့်ထားလို့ အလွန်အေးစိမ့်တယ်၊ စည်းကမ်းတွေ တင်းကြပ်တယ်။ အစားအသောက် ပုံမှန် ကောင်းစွာ ကျွေးတာကလွဲလို့ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် ဘာမှ ကောင်းမွန်အောင် ထားမပေးဘူးလို့ အထဲ ရောက်ဖူးသူ အမျိူးသမီးအချို့က ပြောတာ ကြားရပါတယ်။
မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက မြန်မာအလုပ်သမားနဲ့ မြန်မာအလုပ်သမတွေကို ကာကွယ်ဖို့၊ ပညာပေးဖို့၊ စောင့်ရှောက်ဖို့၊ မြှင့်တင်ရေးတွေ လုပ်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေသူတွေ လက်ချိူးရေလို့ ရပါတယ်။ အများကြီး မထွန်းကားသေးဘူး။ အခြား လူမျိူးစုတွေကတော့ သူတို့ သံရုံးတွေ အပါအ၀င် ကူညီမှုတွေ၊ စောင့်ရှောက်မြှင့်တင်မှုတွေ လုပ်နေတာရှိတယ်။ မြန်မာတွေကိုလည်း လက်တွဲ ကူညီမှုပေးတယ် ဆိုတယ်။ တချို့ကတော့လည်း အဲသည်လို ပင်ပန်းဆင်းရဲအလုပ်လုပ်နေသူ၊ ပညာဥာဏ် နဲ့ ကံအကျိူးပေး ချို့တဲ့သူတွေကို မပတ်သက်ချင်တာ ရှိတယ်။ အားနည်းတဲ့သူတို့တတွေကိုပဲ ပြန် လက်ညိူုးထုိုးပြီး အပြစ်တင်တာမျိုးရှိတယ်။ သူတို့ကြောင့် မြန်မာတွေ နာမည်ပျက်တယ်ပေါ့လေ။ သို့သော် လူသားတဦးအနေနဲ့ ကူညီ စောင့်ရှောက်မှုကတော့ ပေးဖို့ အားပေးဖို့တော့ လိုတယ် ထင်ပါတယ်။ မသိသေးသူတွေ၊ ဥပက္ခာပြုနေသူတွေကိုလည်း အခုလို ဆောင်းပါးမျိူးတွေနဲ့ ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေပေးဖို့ လိုမယ် ထင်ပါတယ်။
Posted by မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက် at Sunday, April 24, 20110comments
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားများ နေထိုင်ရာ အဆောင်တခု ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
စက်ရုံမှာ လုပ်အားနဲ့ လုပ်ခလစာ မမျှတတာ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ညံ့ဖျင်းတာတွေအပေါ် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး တောင်းဆိုချက် ၅ ချက် တင်ပြပြီး ဧပြီလ ၁၉ ရက်ကနေ ၂၁ ရက်နေ့အထိ မြန်မာအလုပ်သမား ၆ဝ အပါအဝင် လူမျိုးစုံ စုစုပေါင်း အင်အား ၁၂ဝ လောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီ ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အလုပ်သမားတွေဘက်က လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ NLD- LA မလေးရှားဌာနခွဲက ဦးဥာဏ်လင်းက ပြောပြပါတယ်။
“လုပ်အားနဲ့ လစာမမျှတာ၊ ပြီးတော့ တခြား အခွင့်အရေးတွေ ရဖို့အတွက် သူဌေးကို တောင်းဆိုတာ။ သူဌေးက ပြန်ပြီးတုန့်ပြန်တဲ့နေရာမှာ သူတိုရဲ့ အဆောင်တွေမှာ ရေဖြတ်တာတွေ လုပ်တယ်။ သူတို့က အလုပ်မဆင်းဘဲ ဆန္ဒပြတော့ သူဌေးက ရဲကိုခေါ်ပြီး အလုပ်ပြန်ဆင်းခိုင်းဖို့လုပ်တာကနေပြီး ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်လို့ ယူဆတဲ့ နီပေါတယောက်နဲ့ မြန်မာတယောက် ဖမ်းသွားတယ်။ ခုထက်ထိ ပြန်လွှတ်မပေးသေးဘူး”
အလုပ်သမားတွေက လုပ်အားခ မလေးရှားရင်းဂစ် ၂၅ ရင်းဂစ် အထိ တိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုတာကို ၂၂ ရင်းဂစ် ပေးမယ့်အကြောင်းနဲ့ သောကြာနေ့ ၂၂ ရက်နေ့မှာ အလုပ်ပြန်ဆင်းဖို့ မြန်မာအေးဂျင့်က လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်သမားတွေက လက်မှတ်ထိုးမပေးဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ ၂၁ ရက်နေ့မှာ အလုပ်သမားတွေရှိတဲ့ အဆောင်ကို ရဲတွေရောက်လာပြီး မြန်မာအလုပ်သမား ကိုအောင်ကျော်နဲ့ နီပေါ အလုပ်သမားတဦးကို ဖမ်းသွားပါတယ်။
“သူတို့ကို အတင်းအကြပ် ဖိအားပေးတော့ နောက်ဆုံးပိတ် လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရတယ်။ သူတို့နေတဲ့ အဆောင်အောက်ထပ် အခန်းတွေကို ရဲက ဝင်ပြီး အိပ်နေတဲ့သူတွေကို ရဲတွေ အမြဲဆောင်နေတဲ့ ငြုပ်ကောင်း စပရေးဗူးတွေနဲ့ ပက်သွားတယ်။ လူတွေက လည်ပင်းတွေနာ၊ မျက်လုံးတွေနာပြီး ကျန်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ အားလုံးက အဲလိုဖိအားပေးခံရတော့ ကြောက်ပြီးတော့ လက်မှတ်ထိုးရတာ၊ စာချုပ်တော့မဟုတ်ဘူး။ လောလောဆယ် လုပ်တဲ့လူတွေထဲမှာ ဘယ်သူပါသလဲဆိုတာကို”
တောင်းဆိုချက်တွေကို အလုပ်ရှင်ဘက်က တစုံတရာ ဆွေးနွေးတာမရှိဘဲ အဓမ္မ အလုပ်ဆင်းခိုင်းတဲ့အတွက် သောကြာနေ့ကတော့ အလုပ်သမားတွေ အလုပ် ပြန်ဆင်းနေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားမျှတမှု ဖြစ်ပေါ်ဖို့နဲ့ မတရား အဖမ်းခံရသူတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မလေးရှား အခြေစိုက် အလုပ်သမားအရေး ကူညီပေးနေတဲ့ NGO အဖွဲ့တွေနဲ့ NLD –LA Malaysia အလုပ်သမား ရေးရာဌာနက ဆက်လက် လိုက်ပါ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
RFA သတင်းဌာနမှ ထပ်မံကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ဘန်ကောက် (မဇ္ဈိမ)။ ။ တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများအတွက် မှတ်ပုံတင် အသစ်ပြုလုပ်ခွင့်ကို မကြာခင် ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဟု ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ကြီးက ဧပြီလ ၁၉ ရက် အင်္ဂါနေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး တရပ်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နေးရှင်းသတင်းက ရေးသားထားသည်။
ဒုဝန်ကြီးချုပ် ဆနန် ဦးဆောင်ကာ ဝန်ကြီးဌာန ၂၂ ခုမှ တာဝန်ရှိ အရာရှိများ ပါဝင်သည့် တရားမဝင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ သဘောတူခဲ့ပြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့မှ နောက်ဆုံးအဆင့် အစည်းအဝေးတွင် ဝန်ကြီးချုပ်က သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးမည်ဖြစ်သည်။
“ယခု ဖွင့်လှစ်ပေးမည့် မှတ်ပုံတင်အသစ် အစီအစဉ်ကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သူ မည်သူမဆို တရားဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုဖြင့် ပြင်းထန်စွာ အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လူကုန်ကူးမှုဖြင့်ပါ အပြင်းထန်ဆုံး အပြစ်ပေးသွားမည်” ဟု ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ကြီးက ချလမ်ချိုင်း ဆီရီအွန်၏ ပြောစကားကို အင်္ဂါနေ့ထုတ် ထိုင်းဘာသာဖြင့် ရေးထားသားသော နေရှင်းက ကိုးကားထားသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလကုန်တွင် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လက်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်ထားသူများမှ လွဲ၍ အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ် (ဘဒ်) သက်တမ်း မဆက်တော့ဘဲ တရားမဝင် အလုပ်သမားများအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့သူများကို မစ္စတာ ချလမ်ချိုင်း ဆီရီအွန်က ရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ MWG မှ တာဝန်ခံတဦးက “နောက်အပတ် ပြုလုပ်မယ့် ကက်ဘိနက် အစည်းအဝေးကနေ တရားဝင်ကြေညာဖို့ များပါတယ်။ မဟုတ်ခဲ့ရင် နောက်လဆန်းပေါ့” ဟု မဇ္ဈိမကို ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။ ထို့အတွက် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဝန်ကြီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ကျင်းပလေ့ရှိသည်။
ရောင်ခြည်ဦး အလုပ်သမားများသမဂ္ဂ တာဝန်ခံ ဦးမိုးဆွေက “ဒီကိစ္စကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဘာ့လို့လဲဆိုတော့ အလုပ်သမားတွေက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တရားမဝင် အလုပ်သမား ဖြစ်နေကြတယ်။ ဥပမာ - ပိုင်ရှင်က အလုပ်သမားကို ထိန်းချုပ်ချင်လို့ မလုပ်ပေးတာမျိုး၊ အလုပ်ထွက်တဲ့အခါ အလုပ်သမားတွေရဲ့ လက်မှတ်ကို ပိုင်ရှင်တွေက မပေးလို့ တရားမဝင် ဖြစ်သွားတာမျိုး၊ ပွဲစားနဲ့ လုပ်ရလို့ ဈေးအရမ်းကြီးပြီး မလုပ်နိုင်တာတွေကြောင့် စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး ’’အလုပ်သမားတွေ ကိုယ်တိုင်က အလုပ်ရှင်ရဲ့ ထောက်ခံစာနဲ့တင်ပဲ လက်မှတ်လုပ်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် အလုပ်သမားတွေ အတွက်ရော၊ ထိုင်းအစိုးရအတွက်ပါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေမယ်လို့ အကြံပြုလိုပါတယ်’’ ဟု ပြောသည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန် ဘတ်သက်တမ်း တိုးသောအခါ ဦးရေ ၅၄၃,၇၄၉ မှ ၂၉၅,၁၃၆ ဦးသာ သက်တမ်းဆက်ခဲ့သည်။ တချိန်တည်းတွင် မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား ၃ နိုင်ငံမှ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်၍ အလုပ်လုပ်နေသူပေါင်းမှာ ၅၅ဝ,ဝဝ၃ ဦး ဖြစ်ပြီး ထိုအထဲတွင် မြန်မာက ၃၅၂,၇၄၈ ဦး ပါဝင်ကြောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်သော စာရင်းဇယားကို ကိုးကား၍ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများရေးရာ IOM အဖွဲ့က ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ခဲ့သည်။
အလုပ်သမားများသည် မိမိရောက်ရှိရာ ခရိုင်များတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၊ မျက်နှာပုံပန်းသဏ္ဍာန်နှင့် လက်ချောင်း ၁ဝ ချောင်း လက်ဗွေများကိုပါ ထိုင်းအစိုးရက မှတ်တမ်းတင်မည်။
ယခုဖွင့်လှစ်ပေးမည့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၈ ကြိမ်မြောက် ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ တချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံသားစိစစ်မှုပြု၍ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ကာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုသည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ဆက်လက်ပြုလုပ်နေမည်ဖြစ်သည်။
Posted by မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက် at Saturday, April 23, 20110comments
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့အလယ် ဒင်ဒဲန် နယ်မြေအတွင်းရှိ အထည်ချုပ် စက်ရုံငယ် တခုတွင် မတရား အလုပ်စေခိုင်း၍ လှောင် ပိတ်ခံထားရသည့် မြန်မာ အလုပ်သမား ၆၀ ခန့်ကို ထိုင်း အစိုးရအာဏာပိုင်များက ယမန်နေ့က ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရ သည်။
ယမန်နေ့က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော ပိတ်လှောင်ခံထားရသည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ယင်းအထည်ချုပ် စက်ရုံမှ အပြင်သို့ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာသူ တဦး၏ တိုင်ကြားချက် အရ ထိုအလုပ်သမားများကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လွတ်မြောက်ခဲ့သော ကိုသိန်းနိုင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကယ်တင်ခဲ့သော မြန်မာ အလုပ်သမားများကို ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနှင့် ရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ကိုသိန်းနိုင်သည် ယင်းအထည်ချုပ် စက်ရုံတွင် ၃ လခန့် အကြာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသူ တဦး ဖြစ်သည်။
“သူတို့က လစာ မပေးတာ အမှန်ပဲ၊ ကျနော်တို့ကို ခေါ်ကတည်းက ကယ်ရီခကို တလမှာ နည်းနည်းဖြတ်သွားမယ်ဆိုပြီး အိမ် စရိတ်တွေ ဘာတွေ ဖြတ်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံကိုလည်း တပြားမှ မပေးဘူး”ဟု ကိုသိန်းနိုင်က ဆက်ပြောသည်။
အလုပ်ရှင်က မြန်မာ အလုပ်သမားများကို ပိုက်ဆံ မပေးသည့်အပြင် တခြားစက်ရုံသို့ အလုပ်ပြောင်းလုပ်ရန်ကိုလည်း ခွင့်မပြု ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ အလုပ်သမားများကို တလလျှင် လစာ ဘတ် ၇၀၀၀ ပေးမည်ဟု အလုပ်ရှင်က ပြောသော်လည်း တလလျှင် ဘတ် ၂၀၀ သာရကြောင်း၊ တနေ့လျှင် အလုပ် ၁၆ နာရီ လုပ်ရကြောင်း မြန်မာအလုပ်သမားများက ဆိုသည်။
ထိုင်းသတင်းများ ဖော်ပြချက်အရ အထည်ချုပ်စက်ရုံ ပိုင်ရှင်သည် တရုတ် လူမျိုး ဖြစ်ပြီး လူကုန်ကူးမှု အပါအ၀င် အလုပ်သမား အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂ ခုဖြင့် အရေးယူခံရဖွယ် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒင်ဒဲန် ရဲစခန်းမှာ တာဝန်ကျနေသော ရဲတဦးက မြန်မာ အလုပ်သမား ၃၀ ခန့်ကို ရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထား ကြောင်း၊ မနက်ဖြန်တွင် တရားရုံးတက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ် ဇွန်လကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် မြို့လယ်ရှိ အထည်ချုပ် စက်ရုံငယ် တခုအတွင်း မတရား အလုပ် စေ ခိုင်း ခံရသော မြန်မာ အလုပ်သမား ၆ ဦးကို ဘန်ကောက် အခြေစိုက် ရောင်ခြည်ဦး အလုပ်သမား အဖွဲ့က ကူညီ ကယ်ထုတ် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ၂၅ ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ထိုင်းနှင့် မြန်မာ လူကုန်ကူးမှု ပူးပေါင်း တိုက် ဖျက်ရေး နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို နှစ်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများ လက်မှတ် ရေးထိုးကြကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဓမ္မပိတ်လှောင်၍ အလုပ်ခိုင်းခံထားရသည့် အလုပ်သမားများကို ကယ်ထုတ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
သို့သော် မြန်မာပြည်သားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အထည်ချုပ် စက်ရုံ အပါအ၀င် ဈေး၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ် ငန်း၊ အိမ်ဖော်၊ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီး ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရခြင်းများ မကြာခဏ ကြုံတွေ့ နေရ ကြောင်း သတင်းများ အရသိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လာရောက်အလုပ်လုပ်နေသော ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများမှာ၂ သန်းခွဲမှ ၄ သန်း ၀န်းကျင် ရှိနိုင် ကြောင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းများက ခန့်မှန်းပြောဆိုကြသည်။
ဧရာဝတီ သတင်းဌာနမှ ထပ်မံကူးယူဖော်ပြပါသည်
မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ ထိုင်းတောင်ပိုင်းက ရာဘာတောတွေထဲမှာ စိုးရွံ့ထိတ်လန့်စွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြရတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀
Posted by မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက် at Friday, April 22, 20110comments
ဖိုးပါကြီးက ဖိုးပြုံးချို … တဲ့
စိန်မြင့်က အဖေတစ်ခု သားတစ်ခု … တဲ့
နေတိုးက ဇော်က ကနေသည် …. တဲ့
ဒို့အရပ်ထဲ မင်းသားတွေသာ ပြောင်းပြောင်းသွားတယ်
တေးသွားတွေက အရင်လိုပါပဲ …..
ကူပြောပေးပါအုံး ချက်လီချက်ပလင် ရေ
အညစ်အကြေးတွေ ဆေးကြောတယ် ပြောပြောပြီး
အိုးမဲလေးပဲ သုတ်ကြတာပါ …..
ဒီလိုပါပဲ ချာလီချက်ပလင် ရေ
သူတို့ရဲ့ မဟာရာမဇာတ်ကို ခိုးလာဘူးတော့လည်း
သင်္ကြန်ကို သူတို့ ပြန်ခိုးသွားတာ
ပြောပေးပါနော် ချက်လီချက်ပလင် ရေ
ရေကန်တော့ လိုက်ပါကြောင်း …. ။ ။
ပျူနိုင်ငံ ဆိုက်မှ ထပ်မံကူးယူဖော်ပြပါသည်၊
Posted by မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက် at Monday, April 18, 20110comments
Posted by မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက် at Wednesday, April 13, 20110comments
မဟာချိုင် ယာဉ်တိုက်မှု မြန်မာများ သေဆုံး ဒဏ်ရာရ
ထိုင်းနိုင်ငံ စမွတ်စခွန် ခရိုင် မဟာချိုင်တွင် ယနေ့နံနက် ၇ နာရီ ခန့်က အလုပ်သမား ကြိုပို့ကား ၃ စီးကို ဆယ်ဘီးကားကြီး တစီးက ၀င်တိုက်မိသဖြင့် ကားပေါ်ပါသူထဲမှ ၉ ဦးခန့်သေဆုံးပြီး ၃၀ ကျော် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိသွားကြောင်း သိရသည်။
မဟာချိုင်တွင် မြန်မာအလုပ်သမားများ စီးလာသည့် ကြိုပို့ကား အတိုက်ခံရပြီးနောက် တွေ့ရစဉ်
ယင်း အလုပ်သမား ကြိုပို့ကားများမှာ ဂါလန် ပုဇွန်စက်ရုံမှ ဖြစ်ပြီး ကားတစီးလျှင် လူ ၄၀ ကျော် ၅၀ ခန့်ပါရှိကြောင်း၊ မဟာ ချိုင် တလာကွန့် တံတားအဆင်းတွင် နောက်မှပါလာသော ဆယ်ဘီးကားကြီးက ကြိုပို့ကားများကို တိုက်မိဖြင်းဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်တဦးဖြစ်သူ ကိုခိုင်ကျော်ကျော်က ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
ကိုခိုင်ကျော်ကျော် သည် မြန်မာရွှေ့ ပြောင်း အလုပ်သမားများကို ကူညီပေးသော အဖွဲ့ တခုဖြစ်သည့် မိုနိုထိုင်း အဖွဲ့ မှ စေ တနာ့ ၀န်ထမ်းတဦးဖြစ်ပြီး ကားတိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူများနှင့် ဒဏ်ရာရှိသူများကို လက်ခံကုသပေးသည့် မဟာချိုင် ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိနေသူဖြစ်သည်။
“အခု ကျနော် ဒီမှာ ရောက်တော့ အလောင်း ၉ လောင်းရှိနေပြီ။ ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရလို့ အသည်းအသန်ကုနေတဲ့သူက ၃၀ ကျော်တယ်လို့ သိရတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်း ၉ လောင်းအပြင် နောက်ထပ် ၆ လောင်း ရောက်ရှိလာသည်ဟု သိရကြောင်းလည်း ကိုခိုင်ကျော်ကျော်က ပြောသည်။
မြန်မာအလုပ်သမား ကိုအေးရွှေကလည်း“ဂါလန် စက်ရုံက နယ်ဝေးရပ်ကွက်မှာ ရှိတယ်။ အလုပ်သမားတွေက နေ့တိုင်း အဲဒီကို ဖယ်ရီ(ကြိုပို့ကား)နဲ့ သွားရတယ်။ အလုပ်ဆင်းဖို့ အသွားမှာ အတိုက်ခံရတာ။ စက်ရုံတရုံလုံး ပိတ်ပြီး အခု ဆေးရုံ ကို လာနေကြတယ်”ဟု ပြောပြသည်။
ဂါလန် ပုဇွန်စက်ရုံတွင် အလုပ်နေကြသော မြန်မာအလုပ်သမား ၇၀၀ ကျော် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာအလုပ်သမား အရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသော Human Right Development Foundation (HRDF)မှ မြန်မာ ၀န်ထမ်း ဦးတိုးက“တလာကွန့်မှာက ရေက ရွှဲနေ တာ လေ။ ဆယ်ဘီးကားက ဆလစ်ဖြစ်ပြီးတိုက်တာ။ ဆယ်ဘီး ကားကြီး က အရှိန်နဲ့ မောင်းလာတာဆိုတော့။ တအားကြီး ဆောင့်တိုက်ပစ်သလို ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒါရိုက်အတိုက်ခံရတဲ့ ကားမှာပဲ အလုပ်သမား ၅၀ ကျော်လောက်ပါတယ်။ အတိုက် ခံရတဲ့ ကားရဲ့ ဘော်ဒီကြီးတခုလုံး ပြုတ်ထွက်သွားတယ်။ နေရာတင် ပွဲချင်းပြီး သေတဲ့သူကသေ။ အရေးပေါ် ဆေးရုံပို့တာပို့ ပေါ့”ဟု ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အလုပ်လုပ်နေကြသော ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာ အလုပ်သမားများမှာ ၂ သန်းခွဲမှ ၄ သန်းဝန်းကျင် ရှိကြောင်း အလုပ်သမား အဖွဲ့ အစည်းများက ခန့်မှန်းထားကြသည်။
Posted by မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက် at Tuesday, April 05, 20110comments
ဖူးခက်မြို့တွင် ရဲအယောင်ဆောင် မုဒိမ်းသမားဖမ်းမိ
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံသား ဂေါ်ရခါး မိန်းကလေး တဦးကို ရဲအဖြစ် ဟန်ဆောင် ဖမ်းဆီး၍ ၄ ရက်ကြာ မတရားပြုကျင့်ခဲ့သူဟု သံသယရှိခံရသူ ထိုင်းလူမျိုးတဦးကို ဖူးခက်မြို့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းရောက် နီပေါသားများအဖွဲ့ (Thai Nepali Foundation) က ပြောသည်။
ပါတောင်ရှိ Jungcylon စတိုးဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် အမိသာ ကို မတ်လ ၂၈ က ထိုင်းလူမျိုး အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ဖဖုံမနီရက် ဆိုသူက ရဲအဖြစ် ဟန်ဆောင် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး ၄ ရက်ကြာ မတရား ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ပါတောင်မြို့နယ် ရဲက ယခုလ ၃ ရက်ကပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားသွားသည်။
Thai Nepali Foundation သည် ထိုင်းနိုင်ငံရောက်
ဂေါ်ရခါး မိန်းကလေး တဦးကို ရဲအဖြစ် ဟန်ဆောင် ဖမ်းဆီး၍ ၄ ရက်ကြာ မတရားပြုကျင့်ခဲ့သူ ဖူးခက်မြို့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး (photo :: http://www.komchadluek.net)
မြန်မာနွယ်ဖွား ဂေါ်ရခါး လူမျိုးများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဂေါ်ရခါး လူမျိုးများ စုဖွဲ့ထားသည့် လူမှုရေးအသင်းတခု ဖြစ်သည်။
“ဒီလ ၁ ရက်နေ့က အဲဒီလူက သူစခေါ်သွားတဲ့ ဒီပါတောင်မြို့ကို လာလွှတ်တယ်။ လွှတ်ပြီးနောက်မှာပဲ အမိသာ က ရဲစခန်းကို သွားအမှုဖွင့်တယ်။ ည ၇ နာရီ မိနစ် ၂ဝ လောက်မှာ မိတယ်”ဟု အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး အုမ် ကမဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အမိသာနှင့် သူ့သူငယ်ချင်းများ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ အလုပ်က အပြန်၌ ဖဖုံမနိရက် က ရဲဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကာ နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်များ တောင်းယူကြည့်ရှုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အားလုံးတွင် လက်မှတ်များ ရှိနေသော်လည်း အမိသာ၏ နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်မှာ ရက်လွန်နေပြီဖြစ်၍ ရဲစခန်းသို့ လိုက်ခဲ့ရန် ပြောပြီး ကားဖြင့်ခေါ်သွားသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့နောက် ရဲစခန်းသို့ ခေါ်မသွားဘဲ ကပီမြို့နယ်က တည်းခိုခန်းတခုတွင် အခန်းငှားယူကာ အနိုင်အထက် ပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုလ ၁ ရက်တွင် ဖဖုံမနိရက်က အမိသာကို ၎င်းခေါ်ဆောင်လာရာ ဂျေဂျေ ပလာဇာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ ဖန်းမွန်းဆိုင် လမ်းမပေါ် ပြန်ပို့ရာမှ လမ်းပေါ်တွင် တပ်ထားသည့် စီစီတီဗီ ကင်မရာများမှတဆင့် မှတ်တမ်းရရှိကာ အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ယနေ့ထုတ် ထိုင်း သတင်းစာများတွင် ဖေါ်ပြကြသည်။
ဖဖုံမနိရက်က ယခုလို ရဲဟန်ဆောင်ကာ ဂေါ်ရခါးမိန်းကလေးများကို ဖမ်းဆီး မတရားပြုကျင့်ခဲ့သည်မှာ ၆ ဦးရှိပြီဟု ရဲစခန်းတွင် ထွက်ဆိုကြောင်း ပါတောင်ရဲစခန်း မှ ရဲအရာရှိတဦးကို ကိုးကား၍ ထိုင်း သတင်းဌာန တခုဖြစ်သည့် Komchadluek က ဖော်ပြသည်။
ဖဖုံမနိရက် သည် ဘန်ကောက်အခြေစိုက် သန့်ရှင်းရေး ဆေးရည်ရောင်းသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတခုတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်သူ တဦးဖြစ်ပြီး ၎င်း ပြုကျင့်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးအားလုံးမှာ မြန်မာပြည်ဖွား ဂေါ်ရခါးနွယ်ဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အခု သူဝန်ခံခဲ့တဲ့ ၆ ယောက်ဆိုတာ တရားဝင် တိုင်တန်းခဲ့တဲ့လူတွေပဲ ရှိသေးတာ။ အမိသာ မဖြစ်ခင်ကထဲက အရင် ၅ ယောက်က ဒီစခန်းမှာ တိုင်ထားပြီးသား။ အခုမှ ဖမ်းတာ။ အရှက်တရားကြောင့် ထုတ်ဖေါ်မပြောရဲဘဲ ငုံ့ခံသွားရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာ မသိဘူး”ဟု အုမ် ကပြောသည်။
ဖမ်းးဆီးပြုကျင့် ခံရသူများတွင် ပါလာသည့် ဖုန်း၊ လက်ဝတ်တန်ဆာနှင့် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို ယူထားလိုက်သလို အခြားမြန်မာအလုပ်သမားများကိုလည်း ဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပါတောင်ရဲစခန်းက ဖဖုံမနိရက်ကို အဓမ္မ ပြုကျင့်မှု အပါအဝင် လုယက်မှု၊ လိုင်စင်မပါ လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှု၊ အစိုးရဝန်ထမ်း အယောင်ဆောင်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်၊
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ရေကြီး၍ မြန်မာများ ဘေးကင်းရာ ရွှေ့ပြောင်း
ထိုင်းတောင်ပိုင်းတွင် အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းပြီး ရေကြီးလာတဲ့အတွက် စူရပ်ဌာနီခရိုင်၊ စူရပ်မြို့ ရှိ ဂျေကွန်မစ် ရေလုပ်ငန်း စက်ရုံက မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ ဘေးလွတ်ရာကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း မြို့တမြို့တွင် ရေကြီးနေသည်ကို ဧပြီ ၁ ရက်နေ့က တွေ့ရပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
မြန်မာအလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ကို ပထမပိုင်းမှာ စက်ရုံရဲ့ကုမ္ပဏီ ရုံးဝင်းထဲမှာ ပြောင်းရွှေ့ပေးထားရာက နောက်ပိုင်း မှာ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက စူရပ်ဌာနီ ဘန့်နော်ဒွန် ရပ်ကွက်က စစ်တပ် ကျောင်းဝင်းထဲကို ပြောင်းရွှေ့ပေးထားတယ်လို့ မြန်မာအလုပ်သမား တဦးက ပြောပါတယ်။
“အလုပ်သမားတွေ နေတဲ့ အဆောင်တွေ မျောကုန်တယ်။ တခြားရပ်ကွက်မှာပေါ့၊ တောင်ကုန်းကျတဲ့ နေရာမှာပေါ့။ စစ်တပ်ကျောင်းလို့ ပြောတာပဲ။ အဲဒီ ကျောင်းမှာက နှစ်ထပ်ဆောင် အကြီးကြီးတွေ ရှိတယ်။ အဲလိုမျိုး အပေါ်ထပ်ကြီးမှာ လာပြီး အလုပ်သမားတွေကို ထားထား ပေးထားတယ်။ ရှမ်းမန်နေဂျာတွေက သူတို့ အားလုံး စီစဉ်ပေးတယ်။ အားလုံး လူ ၁၀၀ ကျော်လောက် ရှိမယ်။ ဒီပေါ်မှာ ၂ ရက် ၃ ရက်လောက် နေရဦးမယ်လို့ ပြောတာပဲ။ ကုမ္ပဏီ ရေနစ်နေတော့ ဒီ ကျောင်းပေါ်မှာပဲ သူ့အလုပ်သမားတွေ ပေးထားတယ်။ သူတို့က အဲလိုပေါ့ မနက်စာတွေ ညနေစာတွေ သူတို့ပဲ လာလာ ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်။”
သူတို့စက်ရုံက အသေအပျောက် မရှိပေမဲ့ တခြားဒေသက မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အခြေအနေ မသိရသေးကြောင်း ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့ကိုယ် ပြေးလာရတာ ဆိုတော့လေ၊ သူများတွေတော့ အဲလို ပြောကြတာပေါ့နော်။ တချို့လည်း ရေအားကြီးလို့မို့ ရေထဲပါတယ် ဘာညာလည်း ကြားတော့ ကြားတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာတော့ အဲလိုမျိုး သိပ်မရှိဘူး။ ရေကြီးကာစပေါ့နော်၊ ၃ လပိုင်း ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ လောက်ကထိတော့ အဲလိုမျိုး ဆက်သွယ်လို့ ရနေကြတယ်ပေါ့နော်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ရေကလည်း ကြီးတာနဲ့ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့ကိုယ် သွားနေကြတာဆိုတော့ အဲလို ဖုန်းပိတ်ထားတာတွေ များနေတော့ သိပ်ပြီးတော့ သတင်းတွေ ဘာတွေလည်း မရသေးဘူးရှင့်။”
ထိုင်းတောင်ပိုင်းတွင် အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းပြီး ရေကြီးနေတဲ့အတွက် ရေလုပ်ငန်း၊ ရာဘာလုပ်ငန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာတွေ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထိုင်းတောင်ပိုင်း ပြည်နယ်များဖြစ်သော ချုံဖော်၊ နခွန်ဆီ ထမရတ်၊ ဆူရတ် ဌာနီ၊ တလန်၊ ကရာဘိနှင့် ဖတ်ထလုန်တို့မှာ မိုးရွာ ရေကြီးမှုတွေ ဖြစ်နေပြီး အနည်းဆုံး လူ ၂၅ ဦးသေဆုံးပြီး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေ ထောင်နှင့်ချီ ပိတ်မိနေကြောင်း၊ ကရာဘိ မြိုနယ်တွင် မြေပြိုမှုကြောင့် ၂ ဦးသေဆုံးပြီး လူ ၂၀ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ထိုင်းသတင်းများက ဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted by မြန်မာအလုပ်သမားများကွန်ယက် at Saturday, April 02, 20110comments
မန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူကုန်ကူးမှု ပပျောက်ရေးကို ၅ နှစ် စီမံကိန်းဖြင့် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေ သော်လည်း မြန်မာ အမျိုးသမီးများ လူကုန်ကူးခံရမှု ပမာဏသည် တနှစ်ထက် တနှစ် ပိုမိုများပြား နေကြောင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီး နှိမ်နင်းရေး အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကာရာအိုကေဆိုင် တခုတွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် မိန်းကလေးများ (ဓာတ်ပုံ - allmyanmar.com)
“အဓိက စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲကြောင့် လူကုန်ကူးခံရတာ များနေတာ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
လူကုန်ကူးခံရမှုသည် ၂၀၀၆ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး တနှစ်ထက် တနှစ်များပြားလာကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ပြည့်နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးမှုအများဆုံး ဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် အများဆုံးလူကုန်ကူးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အထက်ပါ လူကုန်ကူးမှု တားဆီး နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူက ပြောဆိုသည်။
၂၀၁၀ပြည့်နှစ်အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိသော လူကုန်ကူးမှု အမှုပေါင်း ၁၇၃မှုအနက် ၁၃၃မှု(၇၆.၈ ရာနှုန်း) မှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ၁၉ မှု(၁၀.၉ ရာနှုန်း)မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ၆ မှု(၃.၄ ရာနှုန်း)မှာ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် ၁၅ မှု(၈.၆ ရာနှုန်း) ပြည်တွင်း လူကုန်ကူးမှုတို့ ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရ သည်။
“လူကုန်ကူးမှုဖြစ်တာက ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ အဖြစ်များတာ။ အဲဒီအထဲမှာမှ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်”ဟု လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတဦးကပြော သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ လူကုန်ကူးမှုပေါင်း ၆၄၁ မှု ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးခံရသူ ၁၄၇၇ ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီး နှိမ်နင်းရေး ဌာန စာရင်းဇယားများအရ သိရသည်။
“ကျမတို့အနေနဲ့ လူကုန်ကူးမှုကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ တရုတ်နိုင်ငံကို အဓိကထားပြီး လူကုန်ကူးတာတွေ့ရပြီး လူကုန်ကူးခံရ တဲ့ သူတွေကို ကယ်တင်ဖို့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိတာတွေ့ရတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စီမံချက်တွေလုပ်သွားပါမယ်”ဟု လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စီမံချက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများ၌ ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးများ ထောင်ခြင်း၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများရှိ နားနေဆောင်များတွင် လူကုန်ကူးမှုပညာပေး စာရွက်များကပ်ခြင်း၊ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး ယာဉ် လုပ်သား များကို အုပ်စုငယ်ပုံစံဖြင့် လူကုန်ကူးမှု ဆိုင်ရာ ပညာပေးခြင်းများ စသည်တို့ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
လူကုန်မှုများတွင် အဓမ္မထိမ်းမြားခြင်း၊ လုပ်အားခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ လိင်အလုပ်သမ အဖြစ်ရောင်းစားခြင်း၊ အဓမ္မ တောင်းရမ်းခိုင်း
ခြင်းနှင့် ကလေး သူငယ် လူကုန်ကူးမှု စသည့် အမျိုးအစားများ ပါဝင်ကြောင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီး နှိမ်နင်းရေး ဗဟိုအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတဦး က ပြောပြသည်။
ယမန်နှစ်အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံရှိ အနှိပ်ခန်း၊ ကာရာအိုကေ ကေတီဗီ၊ အဖျော် ယမကာနှင့် စင်တင်တေးဂီ စသော နေရာများတွင် လုပ်ကိုင်နေသော မိန်းကလေးများကို ချစ်သူရည်းစားအဖြစ် ဟန်ဆောင်၍ လိမ်လည်လှည့်ဖျားကာ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရောင်းစား သော လူကုန်ကူးမှုပုံစံမျိုး ဖြစ်ပွားခြင်းများလည်း ရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ ၅ နှစ်စီမံကိန်း(၂၀၀၇-၂၀၁၁)ကိုပြဌာန်းခဲ့ပြီး စီမံချက်များရေးဆွဲဆောင်ရွက် နေသော်လည်း လူကုန်ကူးမှု ဖမ်းဆီးရမိမှုမှာ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ၅၂ မှု၊ ၂၀၀၇ တွင် ၁၂၇ မှု၊ ၂၀၀၈ တွင် ၁၃၄ မှု၊ ၂၀၀၉ တွင် ၁၅၅ မှု၊ ၂၀၁၀ တွင် ၁၇၃ မှု ဖမ်းဆီးရမိ၍ လူကုန်ကူးမှု ပမာဏမှာ နှစ်စဉ် တိုးပွားလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ အတွင်းက မဲခေါင်ဒေသတွင်း လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် ကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်၊ လာအို၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် စသည့် ၆ နိုင်ငံမှ ၀န်ကြီးများက ရန်ကုန်မြို့တွင် လက်မှတ် ရေး ထိုးထားသည်။
ဧရာဝတီ ၀က်ဆိုက်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
မြန်မာ ၉ ဦး ထိုင်းငါးဖမ်းလှေတွင် ရောင်းစားခံရ
ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့ မြေနီကုန်းရပ်ကွက်မှ လူ ၇ ဦးအပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၉ ဦးကို လူပွဲစားက မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ချွန်ဘူရီလှေဆိပ်၌ ရောင်းစားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုင်းတောင်ပိုင်းရှိ ဆိပ်ကမ်းတခုရှိ ငါးဖမ်းစက်လှေများ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ရောင်းစားခံရသူများမှာ ယခင်လအတွင်းက ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း လဗ်ဘူရီခရိုင် ဘန်ချာမြို့နယ်အတွင်းရှိ VAK နာနတ်သီးစက်ရုံမှ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးပြီးနောက် နယ်စပ်သို့ ပြန်ပို့ခံရသူ ၂၁၆ ဦးထဲမှ ၉ ဦး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစက်ရုံတွင် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက အလုပ်သမား ဆန္ဒပြမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးနောက် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ၀င်ဖမ်းရာ အလုပ်သမား ၂၁၆ ဦး နယ်စပ်သို့ အပို့ခံခဲ့ရသည်။ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် နောက်တကြိမ် ထပ်မံ ဖမ်းဆီးရာ အလုပ်သမားလက်မှတ်မရှိသူ မြန်မာ ၄၀၀ ကျော် နယ်စပ်သို့ ပြန်ပို့ခံခဲ့ရသည်။
နာနတ်သီးစက်ရုံမှ ကိုခိုင်ဇော်နိုင်က “ပုလိပ်ဝင်ဖမ်းလို့ နယ်စပ်အပို့ခံရတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ပွဲစားတွေက ဒီမှာ အလုပ်ပြန်ရမယ် ပြန်လိုက်မလား၊ လမ်းစရိတ်ကို လုပ်အားခထဲကပဲ ပြန်ဖြတ်ယူမယ်လို့ပြောပြီး ခေါ်လာတာ။ တကယ်ကျတော့ ဒီမှာ အလုပ်ပြန်မခေါ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် လမ်းစရိတ် မပေးနိုင်တော့ သူတို့ကို ချွန်ဘူရီက လှေဆိပ်မှာ ရောင်းစားလိုက်တာပေါ့။ ကျနော် စောစောကလေးကတင် ရောင်းစားခံထားရတဲ့ အထဲက တယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောလိုက်ရတယ်။ ဘတ်ငွေ ၁ သောင်းနဲ့ ပြန်ရွေးရင် ရမယ်လို့ ပွဲစားက ပြောထားခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ရောင်းစားခံထားရသူများမှာ ကိုမြင့်နိုင် (အသက် ၃၅ နှစ်)၊ ကိုမင်း (အသက် ၃၀ နှစ်)၊ ကိုဇေယျာလင်း (အသက် ၂၉) နှစ်နှင့် မောင်သန့်ဇင်ထက် (အသက် ၁၅) နှစ် အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၉ ယောက်ဖြစ်ကြောင်း မောင်သန့်ဇင်ထက်၏ မိခင် ဒေါ်စိန်ရီက ပြောသည်။
“ကျမ သားလေးနဲ့အတူတူ သားမက်ရော၊ တူတွေရော ချွန်ဘူရီ လှေဆိပ်မှာ အရောင်းစား ခံထားရတယ်လို့ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ အခု ပင်လယ်ထဲကို ၆ ယောက် ပါသွားပြီ။ ကုန်းပေါ်မှာ ကျန်တာကတော့ ၃ ယောက်ပေါ့။ အဲဒီ ၃ ယောက်ကို တယောက် ဘတ် ၁ သောင်းနဲ့ ရွေးရင်ရမယ်။ ဘတ် ၃ သောင်း ဘဏ်ထဲကို ထည့်ခိုင်းတယ်။ ကျမတို့လည်း မထည့်ရဲဘူး။ တော်ကြာ ငွေလည်းဆုံး၊ လူလည်းဆုံး ဖြစ်မယ်လေ။ နောက်ဆုံး ပြောလာတာကတော့ မြ၀တီတံတားထိပ်က ကိုမြအေးဆိုတဲ့လူကို ဘတ် ၃ သောင်း လွှဲပေးရင် ကုန်းပေါ်မှာ ကျန်နေတဲ့ ၃ ယောက်ကို လွှတ်ပေးမယ်ပေါ့။ ကျမတို့လည်း ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းလည်း မသိတော့ပါဘူး။ သားရယ်၊ သားမက်ရယ်၊ တူတွေရယ် ပါနေတယ်ဆိုတော့ ရူးချင်စိတ်ပေါက်နေပြီ” ဟု ဒေါ်စိန်ရီက ပြောသည်။
ချွန်ဘူရီမှ ငွေပေးရန် ဆက်သွယ်လာသူမှာ ဦးမွန်ကြီးဟု ခေါ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ လူ ၉ ယောက်ကို ခေါ်ယူသွားသူမှာ မဲဆောက်မြို့ မယ်ပအရပ်ရှိ ပြောင်းဖူးစက်ရုံအနီးတွင် နေထိုင်သူ ပွဲစား အငယ်လေး ဖြစ်သည်ဟု ဒေါ်စိန်ရီက ပြောသည်။
ချွန်ဘူရီခရိုင် အချောင်ဒေသတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ထိုင်း ငါးဖမ်းလှေ သူဌေးများထံ ရောင်းစားမှုများ မကြာခဏ ရှိနေပြီး ယင်းကိစ္စများကို Thai Action Committee for Democracy in Burma (TACDB) မှ ဥပဒေ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့က စောင့်ကြည့်နေကြောင်း သိရသည်။
ပွဲစားများသည် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှ လူများကို အလုပ်ကောင်းကောင်းရမည်ဟု မက်လုံးပေးကာ ခေါ်ဆောင်လာပြီး ယခုကဲ့သို့ ရောင်းစားလေ့ရှိကြောင်း TACDB မှ လက်ထောက် ဒါရိုက်တာ ဦးမြင့်ဝေက ပြောသည်။
၎င်းက “ဒီကိုတက်လာတဲ့ လူတွေထဲမှာ တချို့က လမ်းစရိတ် ပေးနိုင်တယ်။ တချို့က လမ်းစရိတ် မပေးနိုင်ဘူး။ အဲဒီ မပေးနိုင်တဲ့လူတွေကို ချွန်ဘူရီ အချောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ ထိုင်းလှေသူဌေးတွေကို ရောင်းစားကြတယ်လေ။ ပွဲစားကတော့ အပြတ်ရောင်းသွားတာပေါ့။ သူဌေးတွေကလည်း သူတို့ကို ၆ လ၊ ၁ နှစ် ပင်လယ်ထဲမှာ ခိုင်းစားတော့တာပေါ့။ ဒီ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ ချွန်ဘူရီမှာ ရောင်းစားခံရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ကျနော်တို့ဆီမှာ အများကြီး ရထားတာတွေရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ဥပဒေ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ရဲ့ အကူအညီကိုလိုရင်တော့ တိုင်တဲ့သူဘက်က အချက်အလက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ခိုင်ခိုင်မာ ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတွင် ယခုကဲ့သို့ မြန်မာပြည်သား အချင်းချင်းက ရောင်းစားသဖြင့် ဒုက္ခရောက်ရသူများ မနည်းကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများရော အမျိုးသမီးများကိုပါ ထိုင်းအလုပ်ရှင်ထံတွင် ကျွန်ရောင်းသကဲ့သို့ အပြတ်ရောင်းစားမှုများလည်း ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် လူရောင်းစားမှု ပပျောက်စေရန် ကြိုးစားသော်လည်း စီးပွားရေး နိမ့်ကျနေသော မြန်မာပြည်မှ လူအများအပြားသည် ပွဲစားများကို အားကိုးကာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ အဖမ်းအဆီး အစစ်အဆေးများကြားမှ နေ့စဉ် လာရောက် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေနေကြသည်။
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ အနည်းဆုံး ၂ သန်းခွဲမှ ၄ သန်းဝန်းကျင်ရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဧရာဝတီ ၀က်ဆိုက်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်၊
စင်္ကာပူက မြန်မာအိမ်တွင်းမှုအလုပ်သမတွေရဲ့ ဘ၀ တစေ့တစေ...
ထိုင်းတွင် တရားမဝင် လုပ်သားများ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ခွ...
မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ ထိုင်းတောင်ပိုင်းက ရာဘာတောတွေထ...
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ရေကြီး၍ မြန်မာများ ဘေးကင်...